DEG DEG: Baarlamaanka Isbedeldoonka Jubbaland oo doortay Madaxweyne cusub. -News and information about Somalia
Home News DEG DEG: Baarlamaanka Isbedeldoonka Jubbaland oo doortay Madaxweyne cusub.
War hadda soo dhacay ayaa sheegaya in Baarlamaanka Golaha Isbedeldoonka Jubbaland uu goor dhoweyd Madaxweyne cusub doortay.
Doorashada oo ka dhacday magaalada Kismaayo waxaa waxaa lagu dhawaaqay in Madaxweynaha Jubbaland ee 4-ta sano ee soo socota loogu doortay C/rashiid Maxamed Xiddig oo ahaa xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Federaalka iyo siyaasi si weyn uga horjeedo Axmed Madoobe.
Doorashada kale ee ka socota magaalada Kismaayo ayaa lagu wadaa in goor dhow madaxweyne loogu doorto Axmed Madoobe.
Previous articleXOG: DF oo si Qasab ah kula wareegtay Hanti ay leeyihiin Agoonta C/fitaax Xalane
Next articleDEG DEG:- Axmed Madoobe Oo Mar Kale Loo Doortay Madaxweynaha Jubbaland
Weriye la shaqeeya Ciidamada Dowladda oo ku dhintay Qaraxii Alshabab ku...